KEDU ESI LELEE DISKI IKE MAKA ARỤMỌRỤ, BEDY (USORO VICTORIA)? - DISK - 2019
N'isiokwu taa, m chọrọ imetụ n'obi kọmputa - diski ike (site na ụzọ, ọtụtụ ndị na-akpọ onye na-arụ ọrụ ahụ obi, mana m onwe m echeghị otú ahụ.) Ọ bụrụ na ọkpụkpọ ahụ gwụrụ - ịzụta ihe ọhụrụ ma enweghi nsogbu ọ bụla, ọ bụrụ na draịvụ ike na-ere ọkụ - mgbe ahụ enweghi ike iweghachite ozi na 99% nke ikpe).
Kedu mgbe m ga-achọ ịlele diski ike maka arụmọrụ na ajọ ọrụ? A na-eme nke a, nke mbụ, mgbe ha zụtara obere diski ike, na nke abuo, mgbe kọmputa ahụ adịghị eguzosi ike: i nwere ụzụ dị iche iche (igwu, ịgbawa); mgbe ịnweta faịlụ ọ bụla - kọmputa ahụ gwụla; ogologo edepụta ozi site na otu disk diski na onye ọzọ; achọta faịlụ na nchekwa, wdg.
N'isiokwu a, m ga-agwa gị na asụsụ dị mfe ka ị ga-esi lelee diski ike maka ihe ọjọọ, na nyocha ya maka arụmọrụ ya n'ọdịnihu, iji chọpụta ụdị ajụjụ ndị ị na-aga.
Melite na 07/12/2015. Ogologo oge gara aga, otu isiokwu gosipụtara na blog banyere mweghachi nke ndị na-agbaji (ọgwụgwọ ihe ọjọọ) site na usoro ihe omume HDAT2 - (Echere m na njikọ ahụ ga-aba uru maka isiokwu a). Ihe dị iche site na MHDD na Victoria bụ nkwado nke ihe ọ bụla na-arụ ọrụ site na ATTA / ATAPI / SATA, SSD, SCSI na USB.
1. Gịnị ka anyị chọrọ?
Tupu ịmalite ọrụ ule, na ebe ebe diski diski adịghị adị, ana m akwado ịdebe faịlụ niile dị mkpa site na diski na mgbasa ozi ndị ọzọ: ngwa draịvụ, mpụga HDD, wdg. (Isiokwu banyere ndabere).
1) Anyị chọrọ usoro pụrụ iche maka ule na iweghachi disk diski. E nwere ọtụtụ ihe omume yiri nke ahụ, ana m akwado iji otu n'ime ndị kasị ewu ewu - Victoria. N'okpuru ebe a bụ njikọ njikọ.
Victoria 4.46 (Njikọ Akaụntụ)
Victoria 4.3 (download victoria43 - mbipụta ochie a nwere ike bara uru maka ndị ọrụ Windows 7, 8 - 64 bit).
2) Ihe dịka elekere 1-2 iji chọpụta diski ike ahụ nke nwere ihe dịka 500-750 GB. Iji lelee 2-3 TB disk weghaara ugboro 3 ugboro ọzọ! N'ikpeazụ, ịlele diski ike bụ ogologo oge.
2. Lelee usoro diski ike Victoria
1) Mgbe nbudatara usoro ihe omume Victoria, wepụ ihe nile dị na archive ahụ ma jiri faịlụ dị ka onye nchịkwa mee ya. Na Windows 8, ihe niile ị ga-eme bụ pịa faịlụ ahụ na bọtịnụ òké aka ma họta "na-agba ọsọ dị ka onye nchịkwa" na nchịkọta nhọrọ nke onye nyocha.
2) Na - esote anyị ga - ahụ windo mmemme dị iche iche: gaa na taabụ "Standard". Onu aka nri n'elu na-egosi draịva siri ike na CD-Rom nke arụnyere n'ime usoro. Họrọ draịvụ ike gị ịchọrọ ịnwale. Wee pịa bọtịnụ "Paspọtụ". Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ otú e si kpebisie ike ịchọta ụdị ụgbọala gị. Lee foto dị n'okpuru.
3) Ọzọ, gaa na "taabụ" SMART ". Ebe ị nwere ike ozugbo pịa bọtịnụ "Get SMART". N'elu ala nke windo ahụ, ozi ahụ bụ "Ọnọdụ SMART = GOOD" ga-apụta.
Ọ bụrụ na onye nchịkwa diski na-arụ ọrụ na AHCI (Native SATA), enweghi ike ịnweta àgwà SMART, na ozi "Get S.M.A.R.T. command ... Njehie na-agụ S.M.A.R.T!" Na log. Enweghị ike ị nweta ihe SMART data na-egosi site na ederede "NA ATA" na-acha ọbara ọbara, mgbe onye na-ahụ maka ụgbọelu ahụ na-adịghị ekwe ka iji ATA-interface interface, tinyere arịrịọ SMART.
N'okwu a, ịkwesịrị ịga Bios na Config tab - >> Serial ATA (SATA) - >> SATA Controller Mode Option - >> ịgbanwe site na AHCI ka Mmekọrịta. Mgbe ịmechara ihe nlele ahụ Victoria, gbanwee ọnọdụ ahụ dị ka ọ dị na mbụ.
Maka ama ndi ozo banyere uzo esi agbanwe ACHI ka IDE (nkwekorita) - i nwere ike gua n'akwukwo ozioma m:
4) Ugbu a banye na taabụ "Ule" wee pịa bọtịnụ "Malite". Na windo isi, n'aka ekpe, a ga-egosipụta akụkụ anọ ahụ, na-ese na agba dị iche iche. Karịsịa, ọ bụrụ na ha niile bụ isi awọ.
Rịba ama mkpa gị iji lekwasị anya na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ akụkụ anọ (ihe a na-akpọ ọjọọ mpaghara, banyere ha na ala). Ọ dị njọ karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere otutu ederede na-acha anụnụ anụnụ na diski ahụ, na nke a, a na-atụ aro ka ị gbanyeghachi diski diski, naanị na igbe "Remap" ahụ gbanwere. N'okwu a, usoro Victoria ga-ekpuchi ndị ọrụ dara ada. N'ụzọ dị otú a, a na-eweghachi ndị na-arụ ọrụ siri ike nke malitere ịmalite ime ihe ike.
Site n'ụzọ, mgbe mgbake dị otú ahụ, disk diski adịghị arụ ọrụ ogologo oge. Ọ bụrụ na ọ malitelarị 'wụsa', mgbe ahụ agaghị m enwe olileanya maka mmemme. Na nnukwu ọnụ ọgụgụ ndị na-acha uhie uhie na ọbara uhie - oge eruo ka ị chee banyere draịvụ ọhụrụ. Na ụzọ, ebubo na-acha anụnụ anụnụ na draịva ọhụrụ ahụ adịghị ekwe ma ọlị!
Maka nkọwa. Banyere ihe ndi di nma ...
Ndị a na-acha anụnụ anụnụ ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-akpọ ndị mmadụ dị oke njọ (nke pụtara ihe ọjọọ, ọ bụghị nke a pụrụ ịgbanwe). Ndị dị otú ahụ a na-edeghị aha nwere ike ịmalite ma mepụta diski ike na ọrụ ya. N'otu aka ahụ, diski ike bụ ngwaọrụ ngwaọrụ.
Mgbe ị na-arụ ọrụ, ihe ikuku magnetic na akpa ike na-agbanwe ngwa ngwa, isi ndị a gụrụ na-agagharịkwa ha. Ọ bụrụ na jolted, kụrụ ngwaọrụ ma ọ bụ nje software, ọ nwere ike ime ka isi kụrụ ma ọ bụ daa n'elu. Ya mere, ọ bụ ezie na ọ ga-apụta, ihe ọjọọ ndị ahụ ga-apụta.
N'ozuzu, ọ bụghị egwu na e nwere ụdị dị iche iche na ọtụtụ disks. Usoro faịlụ diski nwere ike ịtọ ndị dị iche iche iche site na faịlụ / na-agụ arụmọrụ. Ka oge na-aga, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọjọọ nwere ike ịbawanye elu. Ma, dị ka a na-achị, disk diski na-aghọkarị ihe a na-apụghị izere ezere maka ihe ndị ọzọ, tupu e gbuo "ajọ ọrụ". Ọzọkwa, ndị ọrụ ọjọọ ahụ nwere ike ịnọpụ iche na enyemaka nke mmemme pụrụ iche, otu n'ime ha anyị ji mee ihe n'isiokwu a. Mgbe usoro dị otú ahụ - na-emekarị, diski ike malitere ịrụ ọrụ siri ike ma dị mma, Otú ọ dị, ruo ogologo oge ka nkwụsi ike a zuru ezu - a maghị ya ...